Dhammaan ku saabsan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies: Bitcoin, Ether, Litecoin, .. ICOs, ganacsiga
Dhammaan ku saabsan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies: Bitcoin, Ether, Litecoin, ...
Bitcoin, Ether, Litecoin, Monero, Faircoin… waxay durbaba yihiin qaybo aasaasi u ah dhaqaalaha aduunka. Blockchain, boorsada jeebka, caddaynta shaqada, caddaynta saamiga, caddaynta iskaashiga, qandaraasyada caqliga leh, isweydaarsiga atomiga, shabakadda hillaaca, Sarrifka, … eray bixin cusub oo tignoolajiyada cusub, haddii aan iska indhatirno, waxay naga dhigi doontaa qayb cusub Akhris la'aanta 4.0.
Meeshaan waxaan si fiican u falanqeyneynaa xaqiiqda dhabta ah ee lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'Waxaan ka faalloonnaa wararka ugu xiisaha badan waxaanan ku tusnaa luqad la heli karo dhammaan siraha adduunka ee lacagaha aan baahsanayn, tignoolajiyada silsiladda xannibaadda iyo dhammaan fursadaha aan xadidnayn.
1 Waa maxay Blockchain?
2 Waa maxay cryptocurrency?
3 Lacagta ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'
4 Shandad ama boorsooyin
5 Waa maxay macdanta?
6 ICOs, hab cusub oo mashaariicda maalgelinta
Waa maxay Blockchain?
Blockchain ama silsiladda blocks waa mid ka mid ah tignoolajiyada ugu qallafsan qarnigan 21-aad. Fikradda ayaa u muuqata mid fudud: xog ururin isku mid ah oo lagu qaybiyay shabakad baahsan. Haddana, waxa ay gundhig u tahay hannaan-dhaqaale oo cusub, hab lagu dammaanad qaado ma-guuraanka ah ee macluumaadka, in xogta qaar laga dhigo hab sugan oo la heli karo, in xogtaas laga dhigo mid aan la dumin karin iyo xitaa in la awoodo in la fuliyo qandaraasyo caqli-gal ah oo Shuruudaha waa la fuliyaa iyada oo aan qalad aadanaha. Dabcan, sidoo kale dimuqraadiyeynta lacagta adoo u oggolaanaya abuurista cryptocurrencies.
Lacagta cryptocurrency waa lacag elektaroonik ah oo soo saaristeeda, hawlgalkeeda, macaamilkeeda iyo ammaankeeda si cad loogu muujin karo caddaynta qarsoodiga ah. Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' oo ku saleysan tignoolajiyada Blockchain waxay ka dhigan tahay qaab cusub oo lacag baahsan taas oo aan ninna ku shaqaynayn oo loo isticmaali karo sidii lacagta aynu naqaanay oo faa'iidooyin badan leh. Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' waxay heli kartaa qiimaha kalsoonida isticmaalayaashu ay siiso, iyadoo ku saleysan sahayda iyo baahida, isticmaalka iyo sidoo kale qiyamka dheeriga ah ee bulshada adeegsata oo dhista nidaamka deegaanka hareerahooda. Cryptocurrencies ayaa halkan u jooga inay joogaan oo ay noqdaan qayb ka mid ah nolosheena.
Lacagta ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'
Bitcoin waxay ahayd cryptocurrency-kii ugu horreeyay ee laga sameeyo Blockchain-keeda, sidaa darteed, waa tan ugu caansan. Waxaa loo raray qaab lacag-bixineed iyo gudbin qiimo fudud in la isticmaalo, degdeg ah, ammaan ah oo raqiis ah. Maadaama koodka uu yahay il furan, waxaa loo isticmaali karaa oo wax laga beddeli karaa si loo abuuro cryptocurrencies kale oo badan oo leh sifooyin kale iyo, inta badan, fikrado kale oo badan ama ka yar oo xiiso leh iyo ujeedooyin. Litecoin, Monero, Peercoin, Namecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Digibyte, Bytecoin, Ethereum… waa qaar laakiin waxaa jira kumanaan. Qaar ayaa ku xidhan mashaariic aad u hammi badan oo la xidhiidha teknoolajiyada wax ka beddelaya habka aan u habaynno macluumaadka, xogta iyo xataa xidhiidhka bulshada. Waxaa jira xitaa kuwa ay dowladuhu soo saareen, si loo xalliyo dhibaatooyinkooda dhaqaale, sida Petro-ka ay soo saartay dowladda Venezuela oo ay ku taageerto kaydkeeda saliidda, dahabka iyo dheemanka. Kuwo kale waa lacagta dhaq-dhaqaaqa iskaashato ee dabeecadda ka soo horjeeda raasamaalnimada oo ay dhisaan nidaamyo dhaqaale ku meel gaar ah oo ku wajahan waxa ay ugu yeeraan waayihii raasamaal-ka dambe, sida Faircoin. Laakiin waxaa jira wax ka badan fikrado dhaqaale oo ku wareegsan cryptocurrencies: shabakadaha bulshada ee ku abaalmariya tabarucaadka ugu fiican cryptocurrency iyaga u gaar ah, shabakadaha martigelinta faylalka baahsan, suuqyada hantida dhijitaalka ah… suurtagalnimada ayaa ah kuwa aan dhammaad lahayn.
Shandad ama boorsooyin
Si aad u bilowdo la macaamilka adduunka cryptocurrencies, waxaad u baahan tahay oo kaliya qayb yar oo software ah, codsi loo isticmaalo in lagu helo oo loo diro kan ama cryptocurrency-kaas. Boorsooyinka, boorsooyinka ama boorsooyinka elektaroonigga ah waxay akhriyaan diiwaannada Blockchain oo la go'aamiyo waxa gelitaanka xisaabaadka ee la xidhiidha furayaasha gaarka ah ee tilmaamaya iyaga. Taasi waa, codsiyadan "ogyihiin" inta qadaadiic ah ee aad leedahay. Guud ahaan aad bay u fududahay in la isticmaalo oo marka la fahmo qaybaha aasaasiga ah ee hawlgalkooda iyo ammaankooda, waxay noqdaan bangi dhab ah oo loogu talagalay kuwa isticmaala. Ogaanshaha sida uu u shaqeeyo jeebka elektaroonigga ah ayaa lama huraan u ah in la wajaho mustaqbalka kaas oo hadda jira.
Waa maxay macdanta?
Macdanta waa habka loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Waa fikrad cusub laakiin mid si gaar ah ugu shabbahay macdanta dhaqameed. Marka laga hadlayo Bitcoin, waxay ku saabsan tahay adeegsiga awoodda kombiyuutarada si loo xalliyo dhibaatada xisaabeed ee uu keenay koodka. Waxay la mid tahay isku day inaad hesho furaha sirta ah adigoo si isdaba joog ah isku dayaya isku darka xarfo iyo nambarada. Marka, shaqo adag ka dib, aad hesho, block waxaa la abuuray qadaadiic cusub. Inkasta oo aan loo baahnayn in wax laga ogaado macdanta si loo isticmaalo cryptocurrencies, waa fikrad ay tahay inaad barato naftaada si aad u hesho dhaqanka crypto dhabta ah.
ICOs, hab cusub oo mashaariicda maalgelinta
ICO waxay u taagan tahay Bixinta Lacag Bixinta Bilowga ah. Waa hab ay mashaariicda cusub ee adduunka Blockchain ku heli karaan maalgelin. Abuuritaanka calaamado ama lacagaha dhijitaalka ah ee loo iibiyo iibka si loo helo ilo dhaqaale oo loo horumariyo mashruucyo badan ama ka yar ayaa gebi ahaanba mawduuc ah. Kahor soo ifbaxa tignoolajiyada Blockchain, shirkaduhu waxay maalgalin karaan naftooda iyagoo soo saaraya saamiyo. Hadda ficil ahaan qof kastaa wuxuu soo saari karaa cryptocurrency u gaar ah isagoo rajeynaya in dadku ay arki doonaan fursadaha xiisaha leh ee mashruuca ay rabaan inay horumariyaan oo ay go'aansadaan inay maalgashadaan iyagoo iibsanaya qaar ka mid ah. Waa nooc ka mid ah dhaqaale ururinta, dimoqraadiyaynta ilaha dhaqaalaha. Hadda waxay ku jirtaa qof kastaa inuu gaaro qayb ka mid ah mashaariicda xiisaha leh, inkastoo, sidoo kale, maqnaanshaha shuruucdu, ICO-yada waxaa la bilaabi karaa kuwaas oo mashaariicdoodu ay yihiin khiyaano buuxda. Laakiin taasi caqabad kuma aha inaad indhahaaga u jeediso dhinaca kale; Suurtagalnimada in la helo soo laabasho wanaagsan xitaa maalgashi aad u yar ayaa jira. Waa arrin si fudud loo baranayo in yar oo mid kasta oo ka mid ah fikradahan. Oo halkan waxaan kuugu sheegi doonaa kuwa ugu xiisaha badan marka hore.